My freedom: August 2011
ကန်ဒီလတ်တလော သိပ်ကြိုက်နေတဲ့ သီချင်းလေးပါ... ကန်ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀လေးနဲ့လဲ စာသားလေးတွေက သိပ်ကိုက်ညီနေလို့ သီချင်းလေး share ရင်း ကန်ဒီ့စိတ်ကူးတချို့ ပြောပြခွင့်ပြုပါနော်...
ကန်ဒီအဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒတစ်ခုက ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ဖို့ပါ...
ပိုက်ဆံသိပ်ရှိစရာမလိုဘူး.. လိုအပ်တာက နွေးထွေးမှုတွေနဲ့ ပြည့်ဝနေတဲ့ မိသားစု...
ကန်ဒီ ရသမျှအချိန်ကို မိသားစုအတွက်ပဲ ကုန်စေမယ်...
ကန်ဒီစိတ်ကြိုက်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးမှာ ချစ်သူနဲ့တူတူနေမယ်...
အိမ်လေးက သိပ်ခမ်းနားကြီးကျယ်နေစရာမလိုဘူး... သစ်ပင်တွေစိုက်ထားတဲ့ ခြံလေးနဲ့ အိမ်သေးသေးလေး...
ချစ်သူနဲ့ ဈေးတူတူသွားမယ်.. ဟင်းတူတူချက်မယ်... (တကယ်တော့ သူက ကန်ဒီ့ထက်ပိုချက်တတ်တယ်)
ဘုစုခရုလေးတွေရလာရင်လည်း သူတို့ကို မလျော့မတင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆုံးမမယ်...
မိဘကို သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်စေမှာ မဟုတ်သလို... သိပ်ကြောက်နေရတဲ့ ပုံစံမျိုးလည်း မဖြစ်စေရဘူး... သူတို့လုပ်ချင်တာကို အထိုက်အလျောက်ပေးလုပ်မယ်....
ညဆို TV တူတူကြည့်ပြီး စကားတွေပြောမယ်....
ပြင်ဦးလွင်လို ရာသီဥတုအေးပြီး သိပ်မြို့မဆန်တဲ့နေရာမျိုး...
ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူရဲ့ မွေးရပ်မြေ တောင်ကြီးလို ရှမ်းပြည်မှာ ခြံလေးနဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်မယ်...
ပြီးရင် အဲ့မှာပဲ နေတော့မယ်....
သိပ်ကဗျာဆန်နေပေမယ့် ဖြစ်လာအောင် ကန်ဒီကြိုးစားသွားမှာပါ... ^_^
Posted by Candy at 2:16 PM
Labels: About me, Songs
ဒီနေ့မနက် ၅ နာရီ ထတယ်... အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်ဖို့ ကူရမှာလေ... Clementi ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ....
ကန်ဒီတို့နဲ့ အတူနေတဲ့ အန်တီရဲ့ သူငယ်ချင်းအလှူပေါ့.. ကန်ဒီတို့ကတော့ လုပ်အားပေး... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ရတာပဲလေ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်.. :)
လူတွေဖယ်ပြီးကြည့်ပါ... ကျောင်းဘုရားခန်းကို ရိုက်ပြတာပါ.. :D
အသိအလှူရှိတိုင်း လုပ်အားပေးနေကြဆိုတော့ Clementi ကျောင်းတော့ ခဏခဏရောက်ဖြစ်တယ်... ကြက်သားပလာတာကျွေးတာ... အာလူးက ကန်ဒီနွှာထားတာလေ... ဟီး.. ကိုယ်တိုင်ကမချက်တတ်တော့ ဒီလိုလေးတွေပဲ ကြွားရတာ.. အဲလေ.. ကူရတာ... :P
ကော်ဖီလည်း ကန်ဒီဖျော်တာလေ... :D .. တကယ်တော့ ဖျော်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး.. ကန်ဒီက ကိုယ့်အတွက်ဆို စိတ်ကြိုက်ရှယ်ဖျော်တတ်ပေမယ့် သူများက ကိုယ်ကြိုက်သလို ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာလေ.. နောက်ပြီး ဘုန်းဘုန်းတွေအတွက်မို့လို့ ပိုမလုပ်ချင်ဘူး.. မကောင်းမှာ စိုးလို့... ဒါပေမယ့် ကန်ဒီ့ညီမကလည်း သူမလုပ်ဘူး.. ကျန်တဲ့ အစ်မကလည်း မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့... ကန်ဒီပဲ လက်စွမ်းပြလိုက်ပါတယ်... ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရသာတော့ မဟုတ်ဘူး.. ကန်ဒီက ကော်ဖီအချိုမသောက်ဘူးလေ...ဒါပေမယ့် သူများကောင်းတယ် ဆိုတော့လည်း ကောင်းတယ်ပေါ့.. :P
ဘုန်းဘုန်းတွေက ၆ နာရီခွဲ ဘုန်းပေးတော့ ၆ နာရီလောက် ကျောင်းအရောက်သွားရတယ်... ဟိုမှာ ပန်းကန် ဇွန်း အစုံရှိတယ်.. ဘာမှယူသွားစရာမလိုဘူး.. ဟိုရောက်တော့ ပြန်နွှေးပြီး ကပ်လိုက်ရုံပဲလေ... ပြီးတော့ တရားနာ... ဧည့်သည် နည်းနည်းပါးပါးအတွက် ပြင်ပေး... ၁၁ နာရီခွဲလောက် အိမ်ပြန်ရောက်တယ်လေ...
Clementi ကျောင်းထိုင် ဘုန်းဘုန်းက သဘောအရမ်းကောင်းတယ်.. တရားနာပြီးတာတောင် ကန်ဒီတို့ကို ဓာတ်(၁၈)ပါးရယ် သိသင့်တာလေးတွေရယ် ထပ်သင်ပေးလိုက်သေးတယ်... နောက်ပရိတ်ကြိုးလည်း ချည်ပေးလိုက်သေးတယ်....
ဘုန်းဘုန်းဟောတဲ့ တရားထဲက ကန်ဒီမှတ်လာတာလေး မျှဝေလိုက်တယ်နော်...
Clementi ကျောင်းမှာ အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို တရားပွဲရှိတယ်.. ၁ နာရီခွဲလောက်က စတယ်.. နောက်ပြီး ခုဆိုကလေးတွေကို စာသင်ပေးနေပြီ... စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာမလေးတွေနဲ့လေ.. မြန်မာစာပေါ့... ကန်ဒီသွားလုပ်ချင်တာ အရမ်းပဲ... ဒါပေမယ့် စဉ်းစားနေရတယ်... တပတ်ကို ဘယ်နှစ်ရက်လဲ မသိလို့... ကန်ဒီ့အိမ်နဲ့က ကားနဲ့ဆိုလည်း နှစ်ဆင့်စီးရတယ်.. ရထားနဲ့ဆိုလည်း ကားတဆင့်ပြန်စီးရတယ် ဆိုတော့ နေ့တိုင်းဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေဘူးလေ... နောက်တစ်ခုက ခုနောက်ပိုင်း ကျောင်းက စာတွေကလည်း Term တစ်ခုထက်တစ်ခု ပိုပိုများလာတယ်... :(
ကန်ဒီ ငယ်ငယ်က အရမ်းဖြစ်ချင်တာ ဆရာမလေ.. အရင်ပိုစ့်တစ်ခုမှာ ရေးဖူးတယ်.. အထူးသဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလို အခမယူတဲ့ ဆရာမဖြစ်ချင်တာ... ဘုန်းဘုန်းဆီ မေးလ်ပို့ပြီး အချိန်မေးကြည့်ရင် ကောင်းမယ်.... /hmm
အားလုံးတော့ ထင်ကြမှာပဲ... ဒီကောင်မလေး လုပ်ချင်တာတွေ တော်တော်များတာပဲ.. ပုံဆွဲချင်ရတာနဲ့.. ခုနောက်တမျိုးလာပြန်ပြီဆိုပြီး... ဟီးဟီး.. xD
Singapore မှာနေတဲ့သူတွေအတွက် Clementi ကျောင်းလိပ်စာ ရေးပေးလိုက်မယ်နော်... လှူချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင်လေ... :)
23A Jalan Mas Puteh,
Along West Coast Road,
Tel: 6778 1678
(Opposite Blk 701, Near Esso Station)
အားလုံးလဲ ပျော်စရာနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင့်... :)
Posted by Candy at 10:01 PM
မနေ့က ကန်ဒီ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မွေးနေ့... သူက ကန်ဒီတို့ကို ဆာကူရာမှာ ညစာ ဘူဖေးလိုက်ကျွေးတယ်လေ.. (၀ါးတီးပေါ့.. xD) ... ညနေ ၅:၃၀ လောက်ကသွားကြတာ.. ညစာစား.... စားပြီးတော့ သူငယ်ချင်းကို Plaza Singapura မှာ မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေး.. ပြီးတော့ အိမ်ပြန်.. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၉:၃၀...
အော်.. ဒါနဲ့... မနေ့က စင်္ကာပူ အမျိုးသားနေ့ ဆိုတော့ မီးရှူးမီးပန်းတွေ ဖောက်သေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ကန်ဒီတို့နေရာက မမြင်ရဘူး.. :( .... ရဟတ်ယာဉ်တွေပြတာလည်း မတွေ့လိုက်ရဘူး.. တစ်စီးပဲ တွေ့လိုက်တယ်...
စားခဲ့တာတွေ သရေကျအောင် တင်ပါသည်.... :D
Ice-cream နဲ့ အချိုတည်းမယ်..
တော်ပြီ တော်ပြီ.. ဆက်တင်နေရင် ဒီရုပ်ကြီးပဲမြင်နေရတယ် ဆိုပြီး နောက်လာမလည်ဘဲ နေဦးမယ်.... >.<
သူငယ်ချင်းဖို့ လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါအဆစ်.... :P (sooo cute)
ကန်ဒီကျောင်းပြန်တက်နေရပြီ သိလား.... Post ခဏခဏမတင်နိုင်တော့ရင် ခွင့်လွှတ်နော်.. =)
သူ့အထီးကျန်မှုရဲ့ ကနဦးအစက.... >>>>
"အိမ်နားက ကလေးတွေနဲ့ မဆော့နဲ့နော်.."
"အမေ မပါဘဲ သူများနဲ့ ရုပ်ရှင်သွားမကြည့်နဲ့.. "
"ညဘက် အပြင်မသွားရဘူး.. "
"ဘာလို့ အဆင့်က ကျသွားတာလဲ.. "
တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအောက်မှာ ကျုံ့ကျုံ့လေးနေခဲ့တာ ခုဆို (၂၃)နှစ်.....
အဲ့ဒီ စည်းမျဉ်းတွေကပဲ သူ့ကို သူမတူတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်စေခဲ့သလို.....
ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုမရှိတဲ့ တစိမ်းဆန်ဆန်မိသားစုဘ၀သို့ တွန်းပို့.....
နောက်ဆုံး ပိန်းပိန်းမှောင်နေတဲ့ အခန်းထောင့်တစ်နေရာမှာ သူတစ်ယောက်ထဲ...
ခါးသီးဖွယ် အထီးကျန်မှုတွေက သူ့တကိုယ်လုံးကို မသိမသာချည်နှောင်နေကြတယ်....
သူနားလည်ထားတဲ့ ဟန်ချက်ညီတဲ့ မိသားစုဘ၀ဆိုတာ လက်ရည်တပြင်တည်းမဟုတ်တောင်
မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ စားတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးက နံပါတ်(၁)...
နောက်တော့ ပွင့်လင်းမှု ရင်းနှီးမှု ညှိနှိုင်းမှု......
ဒါတွေက သူတခါမှမရခဲ့ဖူးတဲ့ သူအတတ်သိတဲ့ နွေးထွေးမှု....
သူပြင်းပြစွာ ဆာလောင်နေတဲ့ တောင့်တမှု...
ဆို့နင့်စွာ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို မြိုသိပ်....
P.S. ကဗျာလည်း မဟုတ်ပါ.. ဘာမှန်းလဲ မသိပါ.. ရင်ဖွင့်ခြင်းမျှသာ...
ကန်ဒီ Photo editing software လေးတစ်ခု share မလို့ပါ.. ကန်ဒီ့လို Photo ပြင်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့.. သုံးရတာအရမ်းလွယ်တယ်.. Photoscape တဲ့.. (Download လုပ်ချင်ရင် ဒီနေရာ ကိုနှိပ်ပါ).. Free software လေးပါပဲ.. ဓာတ်ပုံတင်တာများတဲ့ ဘလော့ဂါတွေအတွက် Batch editor ပါတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်လေ.. တခါ edit လုပ်တာနဲ့ အားလုံးပုံစံတူ ပြောင်းမှာ.. ဥပမာ ဓာတ်ပုံအောက်နားမှာ ဘလော့နာမည်ရေးတာမျိုးပေါ့..
Center ကို Focus လုပ်တဲ့ effect ...
တစ်ခုချင်းစီလည်း ပြင်လို့ရတယ်.. Effect တွေအများကြီးပါတယ်.. Frame ထည့်ချင်လဲရတယ်.. ကန်ဒီက ဓာတ်ပုံကို ဘောင်လေးနဲ့မှ ပိုကြည့်ကောင်းတယ်ထင်တာလေ...
Low Cross Process effect...
Middle cinema effect..
Antique photo effect...
နောက် Combine လုပ်လို့ရတယ်.. Page ခွဲလို့ရတယ်.. ကန်ဒီ့ ဘလော့ကပုံတွေတော်တော်များများက Photoscape နဲ့ လုပ်ထားတာလေ.. အရမ်း detail ပြင်ချင်ရင်တော့ ကန်ဒီ Adobe Photoshop သုံးတယ်.. Photoscape မှာလည်း နည်းနည်းတော့ detail ပြင်လို့ရတယ်ထင်တယ်.. ကန်ဒီက detail ပြင်တာမျိုးကြတော့ Adobe Photoshop နဲ့ သုံးနေကျဖြစ်နေလို့ပါ..
နောက်တစ်ခုက Animated လည်း လုပ်လို့ရတယ်... :D
Good Luck .. Peace .. xD
Posted by Candy at 1:36 PM
ကန်ဒီ ဒီပိုစ့်လေးရေးတာ တိုင်းရင်းဆေးကို မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်သလို၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးပဲ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာလည်း မဟုတ်ဘူးနော်... ကန်ဒီ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ချို့ကို နမူနာယူပြီး အားလုံးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်.. ^_^
ကန်ဒီ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အဖွားပါ.. လူကြီးဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဆီးချို သွေးတိုးရှိတယ်.. အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ ကုနေတာပေါ့... အဲဒီ့အချိန်မှာ ဗမာဆေးရွက်တစ်ခုပဲ.. (ဘာလဲ ကန်ဒီသေချာမမှတ်မိလို့ စိတ်မရှိပါနဲ့နော်) .. အဲ့ဒီ့ဆေးရွက်က သွေးတိုးကျစေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးစာစောင်တွေရော.. တိုင်းရင်းဆေးစာအုပ်တွေရောမှာ အရမ်းညွှန်းတဲ့အခါမှာ.. ကန်ဒီ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဦးလေးက သူ့အမေအတွက်ဆိုပြီး ကျိုကျိုတိုက်တယ်ပေါ့.. တချိန်တည်းမှာပဲ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆေးကိုလည်း ဖြတ်လိုက်တယ်.. (ဘယ်လောက်ဆိုးလဲနော်).. သွေးတိုး ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ ကုလို့မရတဲ့ရောဂါတွေပါ.. ဆေးသောက်ပြီး ဆိုးရွားမလာအောင် ထိန်းနေရတာ.. အဲဒီ့ထိန်းထားတဲ့ဆေးကို ဖြတ်လိုက်တော့ တခါတည်း အဖွားခမျာ ဆေးရုံရောက်သွားတော့တာပေါ့.. ဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်က တော်တော်နှောင်းနေပြီလေ.. ဆေးရုံတပတ်လောက်တက်ပြီး ဆုံးသွားရှာတယ်... :(
ကန်ဒီ့အမြင်ပြောရရင် သူတို့ညွှန်းတဲ့အရွက်က တကယ်လည်းဆေးဖက်ဝင်ကောင်းဝင်မှာပါ.. ဒါပေမယ့် ဆေးရွက်ကိုကျိုလို့ရတဲ့အရည်မှာ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းအပြင် တခြားဟာတွေလည်းပါသေးတယ်လေ... အင်္ဂလိပ်ဆေးကျတော့ တကယ့်အာနိသင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲ ဆေးလုံးလိုလုပ်ထားတာလေ.. ဆေးလုံးပုံစံပေါ်ရုံပဲ safe ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောထားတာ.. အဲတော့ (၂)ခုယှဉ်ရင် အင်္ဂလိပ်ဆေးရဲ့အာနိသင်က ပိုတာပေါ့.. လက်ရှိ သောက်နေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆေးကိုဖြတ်လိုက်တာတော့ အတော်ဆိုးတာပေါ့နော်..
နောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုက တရုတ်တိုင်းရင်ဆေးပါ.. ကန်ဒီ့ ဆရာမရဲ့အမေဖြစ်တာပေါ့နော် (Singaporean ပါ).. အဲဒီ့အဖွားကို သူ့သမက်က ဒီတိုင်း အားဆေးသဘောပေါ့... တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတစ်ခုကို ၀ယ်လာပြီး တိုက်တယ်... တိုက်ပြီး (၂)ရက်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်.. အဲ့အဖွား ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်.. အကြောင်းကတော့ အဲဒီ့ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးမှာ Toxic ဖြစ်တဲ့ Chemical တစ်ခုပါနေတယ်.. အရောအနှောအနေနဲ့ပါတာပါ.. အဲဒီ့အဖွားအသက်ကို ကယ်လိုက်နိုင်ပေမယ့်... အသည်းတော့ တော်တော်ပျက်စီးသွားတယ်.. အဲဒီ့ဆေးရောင်းတဲ့လူနောက်ကိုလည်း လိုက်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့..
ခုချိန်မှာ တိုင်းရင်းဆေးတွေကို နိုင်ငံတကာမှာ သေချာ Regulate မလုပ်နိုင်သေးဘူးလေ.. စင်္ကာပူမှာဆိုရင် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတွေကို အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့အရောအနှော ပါမပါစစ်တယ် (အဲ့လိုစစ်တာတောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်နော်) .. Quality နဲ့ Safety ပဲစစ်တယ်ပေါ့.. Efficacy အာနိသင်ကိုတော့ မစစ်ဆေးနိုင်သေးဘူး... လက်တွေ့ကျတဲ့ စမ်းသပ်နည်းတွေလည်းမရှိသေးတော့လေ... Health Supplement (Vitamin) တွေ.. Herbal medicine တွေကိုတော့ License တောင်မလိုပဲ ရောင်းခွင့်ရှိတယ်.. အဲတော့ အဓိကက သောက်သုံးတဲ့လူပေါ်ပဲ မူတည်တာပေါ့.. မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တိုင်းရင်းဆေးတွေဘယ်လို regulate လုပ်လဲ ကန်ဒီလည်းသေချာမသိပါဘူး.. ဒါပေမယ့် အဓိကက မိမိကိုယ်တိုင်ချင့်ချိန်နိုင်ဖို့ပဲလေ..
ဒီနေ့လည်း Tag လေးပဲရေးမယ်.. အစ်ကိုချင်းကလေး (ခင်မောင်ချင်း) Tag ထားတဲ့ post လေးပေါ့... Tag လေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးက အရမ်းကောင်းတယ်... Blogger မောင်နှမတွေ တစ်ယောက်နဲ့တယောက် ပိုရင်းနှီးစေဖို့ပေါ့... အားလုံးလဲ သိကြတဲ့အတိုင်း ကန်ဒီက စာမရေးတတ်ဘူး.. ကန်ဒီ့ blog လေးရဲ့ Style ကိုက Diary blog လေးလေ... ဒါပေမယ့် ဒီ Tag လေးကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရေးရတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်... အဲဒါကြောင့်ပဲ ရေးလိုက်ပြီနော်... xD
ကန်ဒီ့ပုံစံကတော့ သိပ်သိသာပါတယ်... ကန်ဒီ့ Blog မှာ ကန်ဒီ့ပုံတွေအများကြီး ရှိတာကို.... :P .. သေသေချာချာပြောပြရရင်တော့ အရပ်က (၅)ပေ (၂)လက်မခွဲ၊ ကိုယ်အလေးချိန်က (၉၄)ပေါင်.. ဟုတ်တယ် ကန်ဒီအရမ်းပိန်တယ်... လူတိုင်းပြောတယ်... အမေကလည်း အမြဲပိန်လိုက်တာ ပိန်လိုက်တာနဲ့.. ဒါပေမယ့် အစားမစားဘူးလဲ မဟုတ်ဘူး.. စားတယ်... ကန်ဒီကတစ်ခါတည်း အများကြီးထက် နည်းနည်းစီ စားနေတတ်တာ.. အစားအသောက်တော့ ချေးများတယ်ပဲ ပြောရမလား.. ကန်ဒီ အသားမှာဆို ကြက်သားနဲ့ ပင်လယ်စာပဲစားတယ် ... ၀က်သား၊ အမဲသား မစားဘူး... မစားဘူးဆိုတာက ဘာသာရေးအရရယ်လည်း မဟုတ်ဘူး.. ကန်ဒီကိုယ်တိုင်က ခုံခုံမင်မင် မကြိုက်တာ.. (၇)တန်းနှစ်လောက်တည်းက ၀က်သားမစားတော့ဘူး... (၁၀)တန်းဖြေပြီးတော့ အမဲသားပါရှောင်လိုက်တယ်.. ကြက်သားဆိုလည်း အရေခွံမစားဘူး (ချေးများပုံ ပြောပါတယ်).. အသီးအနှံနဲ့ ငါးတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်.. ကော်ဖီအရမ်းကြိုက်တယ်... fast food တွေမစားဘူး.. ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူး.. ကိုယ်တိုင်သိပ်မချက်တတ်ပေမယ့် ချက်စားတာများတယ်.. ငါးဟင်းတော့ လုံးဝမချက်တတ်ဘူး... :( ...အားကစားကတော့ အခုလောလောဆယ် ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး.. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကန်ဒီကျောင်းမှာ Aerobic ဆော့တယ်.. (မရီနဲ့နော်.. ဟီး) .. ပြိုင်ပွဲတွေလည်း ပြိုင်တယ်.. တိုင်းအဆင့်မှာ အုပ်စုလိုက် ဒုတိယရဖူးတယ်.. :D
မိတ်ကပ်ပြင်ရတာ ကျော့ကျော့လေးနေရတာ ကန်ဒီအရမ်းကြိုက်တယ်.. အဲ့ဒါ ကန်ဒီဝါသနာပဲလေ.. တခါတလေ အိမ်မှာအားနေရင် မျက်နှာပေါ်မှာ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတတ်တာ.. ပြီးရင် ဓာတ်ပုံရိုက်.. ပြီးရင်မျက်နှာပြန်သစ်... ဒါပေမယ့် အပြင်သွားရင်တော့ သာမာန်ထက် ပိုမပြင်ပါဘူး..
အိမ်မှာနေရင် moisturizer ကလွဲပြီး ဘာမှမလိမ်းဘူး... ညအိပ်ဝတ်စုံနဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်နေတတ်တယ်.. နောက်ကန်ဒီ့အကျင့် တစ်ခုက နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပြီးရင်လည်း သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး.. စားချင်သလိုစားတာပဲ.. စားပြီးရင်လည်း ပါးစပ်ပြန်သုတ်တာပဲ.... ပြန်လဲမဆိုးဘူး... ဒီတိုင်းပဲ.. အဲတော့ ဘာမှမထူးဘူး မဆိုးတာနဲ့.. :P .. အဲ.. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပြီးရင် ဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ်.. ကန်ဒီငယ်ငယ်က ပုံတိုင်းအဲ့ပုံပဲ.. xD (သိပ်တော့မမြင်ရဘူး.. :( )
ကန်ဒီက အကြီးဆုံး .. (အလယ်က)
ဆံပင်ကတော့ အရှည်ထားရတာအရမ်းကြိုက်တယ်.. ကန်ဒီငယ်ငယ်က ဆံပင်က ခါးကျော်တယ်... ခုတော့ အဲလောက်ရှည်တော့ဘူး.. ကျောလည်ခါးနားမရောက်တရောက်ပဲ... ဆံပင်အရောင်က ခုလက်ရှိ အညိုနု(မနေ့ကမှ ဆိုးထားတာ.. :P) ... လက်သည်းက မရှည်တရှည်.. တိုကပ်နေအောင်မထားတတ်လို့... လက်သည်းနီက ဆိုးတဲ့အခါဆိုးတယ်.. မဆိုးတဲ့အခါမဆိုးဘူး...
ကန်ဒီက ပေ့ါပေါ့ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်တဲ့ အ၀တ်အစားမျိုးကြိုက်တယ်.. လုံခြုံရမယ်... ကန်ဒီအတိုသိပ်မ၀တ်တတ်ဘူး... ၀တ်မယ်ဆိုလည်း ဘောင်းဘီတိုဝတ်တာများတယ်... စကပ်တိုမ၀တ်တတ်ဘူး... ကန်ဒီက အားနာတတ်တယ်.. တခါတလေ ကိုယ့်ကိုလိမ်နေမှန်းသိရက်နဲ့တောင် အားနာလို့ ပေးရင်ပေးလိုက်တတ်တာ... လူကြောက်တယ်... (မမခရမ်းနွယ်ရေးတာ ဖတ်ဖူးတယ် အဖေနဲ့မကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေက အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့.. သိပ်မှန်တာပဲ... ကန်ဒီအသက်ကြီးမှ အဖေက နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတာလေ...) သူငယ်ချင်းလိုခင်သွားရင်တော့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အုပ်စုလိုက် ဟေးလားဝါးလားပေါ့... များသောအားဖြင့်ကတော့ ကန်ဒီတစ်ယောက်တည်း သွားတတ်လာတတ်တယ်.. ကန်ဒီ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ အထီးကျန်မှုတစ်ခုက အမြဲရှိတယ်.. (Psycho တစ်ခုပေါ့) .. စကားပြောရင် အသံကမတိုးမကျယ်... Presentation တွေဆိုရင်တော့ အကျယ်ကြီးပဲ.. အရင်ကတိုးလို့ သူများပြောလွန်းလို့ ကျင့်ရင်းကျင့်ရင်း ကျယ်သွားတာ.. :P
ကန်ဒီ့အကြောင်းကတော့ ဒါပါပဲရှင်... :D
ဒီTagလေးက ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရေးရတဲ့ Tag ကလေးလို့ ကန်ဒီနားလည်လိုက်တယ်.. ကန်ဒီရေးတာ မှန်မယ်ထင်ပါတယ်နော်.. ကန်ဒီကို Tagတဲ့ အစ်ကိုချင်းကလေးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် ... အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကန်ဒီမှာ ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိပ်မရှိပါဘူး.. ကန်ဒီကလျှောက်လည်ဖြစ်ရင်လည်း link သိပ်မထားခဲ့တတ်ဘူး... ရှက်လို့.. ကန်ဒီBlogက သူများတွေလိုလဲ စာကောင်းကောင်းတွေမရှိဘူး.. ဗဟုသုတရစရာတွေလည်းမရှိဘူး... ကန်ဒီ့အကြောင်းပဲရေးတာများတဲ့ Diary blog လေးဆိုတော့လေ... ကန်ဒီ့ဆီလာလည်ကြတဲ့၊ ကန်ဒီမဟုတ်က ဟုတ်ကရေးသမျှ comment ပေးကြတဲ့ အစ်ကိုတွေကိုရော အစ်မတွေကိုရော အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကဲ ခုချိန်ကစပြီး ဆက်Tag ပါတော့မယ်ရှင်... မမမိုးပန်းချီနဲ့ မမခရမ်းနွယ် ရေ အားရင်ရေးပေးပါဦးနော်... ကိုပဥာက်.. ကဗျာဆရာကြီး... ရေးပေးဦးနော်.. ကဗျာလိုရေးချင်လည်းရတယ်... :P ... စာမရေးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုသော်ဇင်စိုး (The Starry Night)ရေ အချိန်ရရင်ရေးပေးပါနော်... နောက်ပြီး တီတီ (Thet Nandar Family).. ကန်ဒီကို အချိန်ရရင်ရေးပေးပါနော်.... အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင့်.. :P
My Diary (207)